2020 High Uru Online Ịgba chaa chaa Mobile Game - High Uru Holding Fish Games. Hazie Game Software. magburu onwe cabinets.
Home » Product » 2020 High Uru Online Ịgba chaa chaa Mobile Game
2020 High Uru Online Ịgba chaa chaa Mobile Game
1. Karịrị 50+ Amamiihe Game
2. High Uru Ịgba chaa chaa Game & Share Online Grand jackpot
3. 10000+ Player na-Online n'otu oge
4. High Quality Graphics Game Characters na ekwentị gị
Your Favorite cha cha Games - Na Go!
Anyị maara na ị hụrụ n'anya na omenala azụ game tebụl hụrụ na ọkacha mmasị gị Egwulegwu. Ma ihe ma ọ bụrụ na anyị na-gwara gị, ị pụrụ nwere ohere ọkacha mmasị gị azụ table egwuregwu ziri ezi na gị mobile ngwaọrụ? Talk banyere adaba, abụghị nkwụsị fun! The V-ike App awade otutu obibia ịnweta azụ / oghere egwuregwu n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla. Ma ị na-oké azụ / oghere game player ma ọ bụ na i nwere azụ / oghere game table n'ebe ị na-azụ ahịa, anyị kwere ị ga-n'anya na mma nke nbudata anyị ngwa-egwu n'ụlọ ma ọ bụ na-enye gị Egwulegwu ọbịa a dị iche iche n'ụzọ na-egwu ha mmasị egwuregwu.
The V-ike App e kere ka-enye Player na otu mmekọrịta na-ekere òkè ahụmahụ ha na-enweta site na egwu na-akpọ ha mmasị azụ egwuregwu na a local Egwulegwu, naanị na kwukwara na mma nke ịbụ ike na-egwu n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla. The V-ike App nwere ike ibudata na ma iOS na gam akporo ngwaọrụ. Play site na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, mgbe ọ bụla ị na-na na na na ọnọdụ friendly mpi ọzọ online ọrụ na-egosi anya nkà gị irite ụgwọ ọrụ!
nzọụkwụ 1: Mepee anyị website (https://www.vmight.xyz/#/download/index) na internet nchọgharị na mkpanaka gị na ngwaọrụ (iPhone, iPad, gam akporo).
Kpatụ button na n'elu nri akuku na-ekwu, "DOWNLOAD"
Họrọ "pịa wụnye" button.
Gaa na gị na ekwentị ntọala na-emeghe "Device Management."
Họrọ Shenzhen Amamihe na-ahọrọ "Trust."
gam akporo Ngwaọrụ:
Pịa bọtịnụ na n'elu nri akuku "DOWNLOAD"
nzọụkwụ 2: Mepee V-ike App na mkpanaka gị na ngwaọrụ na input njirimara gị ID na paswọọdụ abanye na.
nzọụkwụ 3: Na-akpọ ọkacha mmasị gị egwuregwu ke laa na V-ike App!
Q: Enwere m ike ịzụlite m game osisi site TAS?
A: Ee ị nwere ike! TAS awade development ọrụ. Nanị nye anyị gị echiche na anyị nwere ike nabata gị chọrọ. E nwere kacha nta iji quantities jikọtara development nhọrọ. Kpọtụrụ anyị maka ịnye ọnụahịa na oge akara metụtara na mmepe nke ịgba chaa chaa egwuregwu.
Q: Gịnị bụ akwụkwọ ikike nke gị ngwaahịa?
A: Anyị na-eguzo n'azụ àgwà nke anyị na na ga ịrụzi ma ọ bụ dochie ọ bụla ngwaahịa na bụ ntụpọ n'ihi emeputa nkwarụ. Mgbe ịkpọtụrụ oru nkwado na akwụkwọ ikike ajụjụ, biko nye ngwaahịa Oghere Usoro ọgụgụ otú anyị nwere ike gosi na ụbọchị nke zuo. The Game Boards: 12 ọnwa akwụkwọ ikike site na ụbọchị nke zuo.
Q: Nwere ike na PCB osisi ọdịda abụ idozi? Ole ọ ga-ewe iji nweta ya rụziri na ndị dị mkpa na-eri?
A: Ọ bụrụ na ọ bụ n'ime akwụkwọ ikike oge na mmebi bụ n'ihi na ndị na-abụghị ụmụ mmadụ ihe, mgbe ọ ka na isiokwu maka akwụkwọ ikike uru. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe karịrị akwụkwọ ikike mgbe, anyị ga gwa gị maka mkpa na-eri maka idozi na mmezi ka anya dị ka o kwere omume. nye anyị 3-7 -arụ ọrụ ụbọchị ka ya idozi (ewepu mbupu oge).
Q: Olee otú anyị pụrụ idozi ma ọ bụrụ na anyị na-apụghị ọma wụnye osisi na-ezute oru mbipụta?
A: I nwere ike na-ezo aka nchọ ngwaahịa ntuziaka na na wiring ntụziaka n'elu purchase.We ga-enye online aka ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
N'ịkụ azụ Arcade Game High Uru The Kylin Égbè Eluigwe
Fish Game Ịgba chaa chaa Ocean King 3 Plus Buffalo Égbè Eluigwe
Ite-O-Gold touchscreen Multi-Game Board
Ịgba chaa chaa oghere Machines FAFAFA Site IGS
Ịgba chaa chaa Ohere mepere Obi ụtọ na-ejegharị Site oké ozu
Cha cha oghere Machine Ịgba chaa chaa Anya nke Fortune Site oké ozu
Ịgba chaa chaa Machines N'ihi Sale Dragon si Riches Site oké ozu